पंकज धामी आश्विन १०, २०७६
यहाँ सरकारी हस्तक्षेप मात्रै हुने रिपोर्ट पनि आइसीसी कहाँ गयो भने नेपाली क्रिकेट सकिन्छ । आइसीसीले कुनै सपोर्ट गर्न सक्ने आधार हुँदैन् । त्यत्रो सयौँ देशहरु मेम्बर भएको आइसीसीले नेपाललाई कतिसम्म ह्याण्डिल गर्ला । पुरा पढ्नुहोस्
राजपाको आन्तरिक समस्याले एकीकरणमा ढिलाई – शिवजी यादव शिवजी यादव राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकताको चर्चा अहिले सेलाएको छ । पार्टी एकीकरणबारे मुख्य एजेण्डा बनाएर राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकसमेत बस्यो । राजपाले न एकीकरणको निश्कर्ष निकाल्न सक्यो, न हुदैन भन्न सक्यो । तर दुवै पार्टी एकीकरणका लागि निरन्तर अनौपचारिक छलफलमा छन् । आश्विन १०, २०७६
चीनसँग तल परेर सहयोग माग्न आवश्यक नै छैन अरुण सुवेदी सरकारलाई यस्तो झिनामसिना सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता बुझ्न सकेको छैन । त्रिपाल जस्ता साना सहयोगका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ अनुरोध गरेको भएहुन्थ्यो । नेपाल त एउटा राष्ट्र हो । चीन जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रसंग तल परेर सहयोग माग्न आवश्यक नै छैन । भदौ २५, २०७६
परिषद् ऐनले चल्ने हो राम प्रसाद भण्डारी करिब २५ सय नेपाली विद्यार्थी छन्, जसले माईक्रोबायोलोजीमा मास्टर्स गरेका छन् । पढाई पुरा भएपनि उनीहरुले काम भने पाउन सकेका छैनन् । त्यही भएर उनीहरु केही समययता आन्दोलित छन् । भदौ १७, २०७६
हामीलाई ‘मेन कोर्स’ बाट विचलित भएर ‘पपुलिस्ट’ हुनु छैन गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा भदौ १५, २०७६
‘पढ्न दिने, सर्टिफिकेट दिने तर काम गर्न नदिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ’ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचबिसी)ले एमएस्सी र बिएस्सी माइक्रोबायोलोजीस्टलाई लाईसेन्स नदिएको विषयमा आन्दोलन चलिरहेको छ । मेडिकल, ल्याब, खाद्य तथा गुण नियन्त्रणका साथै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनसरोकारका क्षेत्रमा अत्यावश्यक माइक्रोबायोलोजिस्टहरुको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन चलेको हो । भदौ ६, २०७६
सग्लो पार्टीको नेतृत्व गर्ने कि टुक्रे पार्टीको ? पार्टी एकीकृत भइसकेको परिस्थितिमा नेताहरुले पदभन्दा कार्यकर्ता र जनताबीचमा आफैं स्थापित हुँदै जानुपर्ने भएकाले यो कुरामा नेतृत्व अल्झेर बस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । भदौ २, २०७६
जम्मू कश्मीर विवादमा नेपाल मौन रहनुनै उचीतः पूर्व राजदुत उपाध्याय भारत र पाकिस्तानको बीचमा आतंकवादका घटनाहरुले सम्बन्ध विग्रेको थियो । अहिले त्यो चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला हाम्रा पनि केही नैतिक मूल्यमान्यताहरु छन् । श्रावण २४, २०७६
'दूध उत्पादन बढ्यो तर बजारमा अभाव' श्रावण २०, २०७६
लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध आन्दोलन किन ? काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले संविधानको मर्म विपरित विज्ञापन निकालेको भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ । विभिन्न स्थानीय तहले पठाएको विवरण अुनसार आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनको परीक्षा साउन ४ गते शनिबारबाट हुँदैछ । यता आदिवासी जनजाती महासंघ लगायतका संघ संस्थाहरु आयोगको विज्ञापनमा समावेशी र संविधान बमोजिम नभएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश श्रावण ३, २०७६
ए ! हामीलाई विष त नखुवाउ... असार २३, २०७६
'विकास निर्माणको एउटा मोडल तयार पारेर काम गर्नुपर्छ, अन्यथा हामीले दुःख पाउँछौ' जेसिबी चलाउन जान्न मान्छे अहिले सडक बनाउन जान्ने इन्जिनियरको रुपमा विकास भयो । कुन तरिकाको प्रविधि अपनाउने ? कति खर्च लाग्छ ? भन्ने कुराहरु हामीले इस्टमेट नबनाई काम अघि बढाउँदा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । असार १६, २०७६
पौडेल हत्याको बदला लिएरै छाड्छौंः विप्लव अझ निःशस्त्र रुपमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालनका क्रममा हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने र हत्या गर्ने जस्तो गम्भिर मानव अधिकार उलंघनको घटना पनि भए । पछिल्लो उदाहरणको रुपमा सर्लाहीको लालबन्दिमा हाम्रो पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलमाथि जुन किसिमको आक्रमण भयो त्यसले सरकारको फाँसीबादी चरित्र पुष्टि गर्दछ । हामी त्यसको डटेर सामना गर्दछौं । असार १०, २०७६
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई नै समाप्त पार्ने काम गरेको छः व्यवसायी रवि सिँह (भिडियाे अन्तर्वार्ता) हामी विकासका सम्बाहक हौँ । विकास निर्माणका कार्य बन्द हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । जेठ २६, २०७६
खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष नै भन्छन्ः बजेट कनिका छरेजस्तो नहोस् सरकारले हवाई मार्गदेखि, स्मार्ट सिटि, औद्योगीक क्षेत्र लगायतका विभिन्न योजनाहरु अघि सारेको छ, यी महत्वकाँक्षी योजना हुन् । जेठ १०, २०७६
पाटन अर्थात ‘डजन्ट स्लीप सीटी’ पर्यटकहरुले दिउँसोको सयममा भन्दा रातीको सयमा आउँदा बस्न योग्य बनाउन हामीले ‘होम स्टे, रात्रीकालिन जिवन, साँस्कृतीक जीवन्त सम्पदाको संरक्षण’को काम थालनी गरेका छौं । ‘लण्डन सिटी नेभर स्लीप अ डे’ भन्ने गरिएको छ । हामीले पनि यहाँ ‘पाटन सीटी डजन्ट स्लीप’ किन ? भन्ने गरी काम अघि बढाएका छौं । यस्ता विषयमा सबैले मिलेर सम्पदाको संरक्षण गर्ने हो । पर्यटकहरु आउँदा उनीहरुलाई खाने र बस्ने व्यवस्था गरिनेछ । जेठ ९, २०७६